Te ho Voalohany Foana ve Ianao? Ampianaro Hanampy Olona ny Zanakao
Te ho Voalohany Foana ve Ianao?
MAHAFANTATRA olona te ho voalohany foana ve ianao?... Mety hanositosika ny olon-kafa izy mba ho voalohany, rehefa misy zavatra ilaharana. Efa nahita izany ve ianao?... Olon-dehibe mihitsy aza no hitan’ilay Mpampianatra Lehibe, niezaka hahazo ny toerana voalohany, na ambony indrindra. Tsy tiany izany. Andeha hojerentsika izay nitranga.
Efa nahita olona te ho voalohany ve ianao?
Tantarain’ny Baiboly fa voasa hisakafo tany an-tranon’ny Fariseo iray, mpitondra fivavahana nalaza, i Jesosy. Nijery an’ireo nasaina izy, ka hitany ireo niditra sy nifidy ny toerana tsara indrindra. Nisy tantara nolazainy tamin’ireo olona nasaina. Tianao ve ny handre ilay izy?...
Hoy i Jesosy: ‘Raha misy manasa anao ho amin’ny fampakaram-bady, dia aza mifidy ny toerana tsara indrindra.’ Nahoana i Jesosy no nilaza izany, raha fantatrao?... Nohazavainy fa mety hisy olona ambony kokoa tamin’ireo nasaina ka, araka ny hitanao eto amin’ny sary, dia tonga ny tompom-panasana milaza hoe: ‘Omeo an’ity olona ity ny toerana, ary mifindrà erỳ ianao.’ Hanao ahoana ilay nifidy ny toerana tsara indrindra?... Ho menatra izy, satria ho hitan’ny nasaina rehetra hifindra amin’ny toerana ratsiratsy kokoa.
Nasehon’i Jesosy fa tsy mety ny maniry ny toerana tsara indrindra. Hoy izy: ‘Raha misy manasa anao ho amin’ny fampakaram-bady, dia mipetraha eo amin’ny toerana ambany indrindra. Mety ho tonga amin’izay ilay nanasa anao, ka hilaza hoe: “Mandrosoa ho amin’ny toerana ambony kokoa e!” Hahazo voninahitra eo imason’ny nasaina rehetra ianao amin’izay, satria hankeo amin’ny toerana tsara kokoa.’—Lioka 14:1, 7-11.
Inona no lesona nomen’i Jesosy rehefa nitantara momba an’ireo naka ny toerana tsara indrindra izy?
Azonao ve ny hevi-dehibe ao amin’io tantara nolazain’i Jesosy io?... Ity misy ohatra hahitana raha azonao ilay izy. Tokony hihazakazaka haka toerana ve ianao rehefa miditra ao anaty bisy feno be, ka hanjary hisy olon-dehibe ho voatery hitsangana?... Ho faly ve i Jesosy raha manao izany ianao?...
Mety hisy hilaza fa tsy mampaninona an’i Jesosy izay ataontsika. Mino izany ve ianao?... Nijery ireo olona nifidy izay hitoerany i Jesosy, tamin’izy nisakafo tao amin’ilay Fariseo. Tsy heverinao ve fa tiany ho fantatra koa izay ataontsika?... Any an-danitra i Jesosy izao, ary afaka mahita antsika tsara.
Mipoitra ny zava-manahirana rehefa misy te ho voalohany. Mahatonga ady izany matetika, ary mampahatezitra olona. Mitranga izany indraindray rehefa hiara-mandeha bisy ny ankizy. Mihazakazaka miditra voalohany izy ireo, raha vao mivoha ny varavaran’ilay bisy. Samy te hahazo ny toerana tsara indrindra, eo akaikin’ny varavarankely izy ireo. Inona no mety hitranga amin’izay?... Ie, mety hiady izy ireo.
Mahatonga fahasahiranana be ny faniriana ho voalohany, na dia teo amin’ny apostolin’i Jesosy aza. Hitantsika tao amin’ny Toko 6, fa niady hevitra ny amin’izay lehibe indrindra izy ireo. Inona no nataon’i Jesosy?... Ie, nananatra azy ireo izy. Mbola niady hevitra indray anefa izy ireo tatỳ aoriana. Ahoana no nahatonga izany?
Niaraka tamin’i Jesosy ny apostoly sy ny olon-kafa koa, tamin’izy nankany Jerosalema farany. Efa noresahiny tamin’izy ireo ny momba ilay Fanjakany, ka nieritreritra i Jakoba sy Jaona fa hiara-manjaka taminy. Noresahin’izy ireo tamin’i Salome, reniny, mihitsy aza ilay izy. (Matio 27:56; Marka 15:40) Nanatona an’i Jesosy àry i Salome teny an-dalana, ka niondrika teo aminy mba hangataka tombontsoa manokana.
“Inona no irinao?”, hoy i Jesosy. Nolazainy fa ho tiany raha navelan’i Jesosy hipetraka teo ankavanany sy teo ankaviany izy mirahalahy zanany, rehefa ho mpanjaka izy. Ahoana hoy ireo apostoly folo hafa rehefa fantany izay nasain’i Jakoba sy Jaona nangatahin’ny reniny?...
Inona no angatahin’i Salome amin’i Jesosy, ary inona no vokany?
Tezitra be tamin’izy mirahalahy izy ireo. Nomen’i Jesosy torohevitra tsara ny apostoliny rehetra tamin’izay. Nolazainy fa ny mpitondra eo amin’izao tontolo izao no te ho lehibe sy ambony. Tian’izy ireo ny hahazo toerana ambony satria eo ambany fahefany ny olona rehetra amin’izay. Nolazain’i Jesosy kosa fa tsy tokony hanao toy izany ny mpianany. Hoy izy: ‘Izay te ho lehibe aminareo dia tsy maintsy mpanomponareo.’ Eritrereto izany!—Matio 20:20-28.
Fantatrao ve ny ataon’ny mpanompo?... Manompo izy, fa tsy mieritreritra ny hotompoina. Maka ny toerana ambany indrindra izy fa tsy ny toerana ambony indrindra. Manetry tena izy fa tsy manambony tena. Tadidio anefa fa izay te ho voalohany, hoy i Jesosy, dia tokony ho mpanompon’ny hafa.
Inona no dikan’izany, araka ny hevitrao?... Hiady ny toerana tsara indrindra amin’ny tompony ve ny mpanompo? Sa hiady ny hisakafo voalohany, araka ny hevitrao?... Nohazavain’i Jesosy fa manetry tena eo anoloan’ny tompony foana ny mpanompo.—Lioka 17:7-10.
Tsy hiady ho voalohany àry isika, fa inona kosa no tokony hataontsika?... Tokony ho toy ny mpanompo isika, ka hanetry tena. Midika izany fa heverintsika ho ambony noho isika ny olon-kafa. Tadidinao ve ny fomba anaovana izany?... Jereo indray àry ny pejy faha-40 sy 41, mba hahitanao ny sasany amin’izany.
Hotsaroanao fa nanetry tena ilay Mpampianatra Lehibe, ka nanompo. Nandohalika mihitsy izy, ny takariva farany niarahany tamin’ny apostoliny, ary nanasa ny tongotr’izy ireo. Raha manetry tena koa isika ka manompo, dia ho faly amintsika ilay Mpampianatra Lehibe sy Jehovah Andriamanitra, Rainy.
Andeha isika hamaky andininy vitsivitsy mampirisika antsika hanetry tena eo anoloan’ny olon-kafa: Lioka 9:48; Romanina 12:3; Filipianina 2:3, 4.
Hizara Hizara Te ho Voalohany Foana ve Ianao?
Mba Mahaiza Miandry!